काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी नौ दिने राजकीय भ्रमणका लागि आज चीन प्रस्थान गरेकी छिन् । बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) को दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागी हुन राष्ट्रपति भण्डारी त्यसतर्फ प्रस्थान गरेकी हुन् । राष्ट्रपतिलाई बिदाइ गर्न प्रधानमन्त्रीसहित उच्चपदस्थ सरकारी अधिकारी त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल पुगेका थिए ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी नेपाल एयरलाइन्सको चार्टर्ड विमानबाट चीनतर्फ गएकी हुन् राष्ट्रपति भण्डारीको भ्रमण टोलीमा ३४ जना सदस्य सहभागी रहेका छन् । राष्ट्रपति भण्डारी पहिलो दिन चिनका राष्ट्रपति सि जिनपिङको सहर सान्सी प्रान्तमा बस्नेछिन् । उनी भोलिमात्रै बेइजिङ पुग्ने कार्यक्रम रहेको छ ।
राष्ट्रपति भण्डारीले बीआरआईको उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ । बीआरआईमा राष्ट्रपति भण्डारीले नेपालको भूमिका र महत्वका क्षेत्रबारे प्रष्ट पार्नेछिन् । सम्मेलनमा पूर्वाधार विकास, सडक तथा रेल सञ्जाल, आर्थिक विकास तथा सहायता, पर्यटनक्षेत्रको विकास आदिबारे छलफल हुनेछ ।
त्यसैगरी राष्ट्रपति भण्डारीले चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङले आयोजना गर्ने राउन्ड टेबल छलफलमा पनि सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । सम्मेलनमा ३७ देशका सरकार तथा राष्ट्र प्रमुख सहभागी हुनेछन् ।
ग्लोवल फोरमले ऋषीदेव बस्तीमा दियो खाद्यन्न सामाग्री
इटहरी । जातिभेद बिरुद्द विश्व मञ्च (ग्लोवल फोरम) ले सुनसरीको हरिनगरा गाउँपालिका वार्ड नंं. ३ को द...
सरकार र प्रतिपक्ष संविधान संशोधनको पक्षमा, मधेशी दल प्याकेजमा सहमति खोज्दै
काठमाडौं । सरकारले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रलाई समेटेको नयाँ नक्साअनुसार निशान छाप...
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले गरे रुकुम घटनाको कडा विरोध, अपराधमा संलग्नलाई कारवाहीको माग
काठमाडौं । रुकुममा भएको बर्बर घटनाको चौतर्फी विरोध भइरहेका बेला पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले घटनाम...
क्वारेन्टाइन स्थलमै किन भयो चिकित्सकबीच ग्याङ फाइट ?
पर्सा । सामान्यतयः चिकित्सकहरु उपचारमा तल्लिन रहन्छन् । तर, मैगलबार वीरगञ्जमा चिकित्सकहरुको दुई स...
रुकुम घटनाको चौतर्फी विरोध, किर्तिपुरमा शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन
काठमाडौं । रुकुमपश्चिम चौरजहारी नगरपालिका–८ सोतीका गाउँलेहरुको कुटाइबाट जाजरकोटको भेरी नगरपालिका–...
रुकुमको बर्बर घटना : दलित पत्रकारले सुरु गरे आमरण अनसन
रुकुम । पश्चिम रुकुममा भएको आततायी घटनाले सिंगो दलित समुदायमाथि अन्याय भएको भन्दै राष्ट्रिय दलित ...